बम पड्काउन पाउने, लुट्न पाउने, उम्मेदवार मार्न पाउने, त्यही हुन्छ लोकतन्त्र ? | My News Nepal
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीले गरेको क्रियाकलापहरु आपराधिक भएको दोहोर्‍याउँदै बम पड्काएर निर्दोष मान्छे मार्ने र चन्दाका नाममा लुटपाट गर्ने तथा धम्क्याएर, तर्साएर यस्तो नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
संसदमा आइतबार हिउँदे अधिवेशनको समापनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘चन्द समूहलाई सरकार र म आफैंले पनि धेरैपटक वार्तामा आउन आग्रह गरिसकेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम रुप चुनाव हो । त्योपनि हुन दिन्न भन्ने । बम पड्काउने निर्दोष मान्छे मार्ने ? निर्दोष मानिस मारिएको छ, कहीँ खुट्टा काटिएको छ । चन्दाका नाममा लुटपाट छ ।
धम्क्याएर, तर्साएर यस्तो नगर्न धेरैपटक भनियो । तर, त्यसलाई वेवास्ता गरेको र चन्द समूह कतै दर्ता नभएको, केही ठेगान नभएको समूह भएकोले सरकारले आपराधिक समूह भन्दै क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।’
‘त्यस समूहका आपराधिक क्रियाकलाप मात्र छन् । नीति नै आपराधिक छन् र क्रियाकलाप आपराधिक छन् । विध्वंसमाथि सरकारले निषेध गर्‍यो । कतिलाई हनहनी ज्वरो आयो । यो त लेकतान्त्रिक भएन भन्ने ? बम पड्काउन पाउने, लुट्न पाउने, उम्मेदवार मार्न पाउने, त्यही हुन्छ लोकतन्त्र ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले थपे ।
विप्लव समूहलाई सम्झाउँदा र वार्ताका लागि आग्रह गर्दा पनि नमानेको बताउँदै उनले भने–‘सबैलाई थाहा होला । सम्झाउँदा मात्र हुने भए कृष्णले किन चक्र बोकेर हिड्नुपर्थ्यो ? सम्झाउँदा हुँदैन भने राज्य नियन्त्रण गर्न लाग्यो, व्याक गियर छैन । यो आतंक र असंवैधानिक क्रियाकलाप केही गर्न नपाउने यस्तो चल्दैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘हतियार बुझाउन समय दिइएको छ । त्यो समयभित्र लुरुलुरु बोकेर बुझाउन आए हुन्छ । बुझाइँदैन भने कसरी हतियार लिनुपर्छ सरकारालई थाहा छ ।’